फोहर व्यवस्थापन गर्ने काम महानगर को हैन रे ? - Nepali Online News Media-shikharnews.com
फोहर व्यवस्थापन गर्ने काम महानगर को हैन रे ?
गणेश शाक्य,बिहान बिहानै एउटा अनलाइन खबर पढ्ने मौका पाइयो । ”फोहर व्यवस्थापन गर्ने जिम्मा हाम्रो हैनः मेयर शाक्य” को शिर्षकमा यो खबर अमेरिका नेपाल नामक अनलाइनवाट प्रकासित खबर हो । खबर पढदै जांदा मेयर शाक्यले शिर्षक अनुसार ठ्याक्कै काठमाण्डौंको फोहर व्यवस्थापन गर्ने जिम्मा महानगरको हैन भन्ने अभिव्यक्ति त देखिएन । सायद मैले बुझ्न नसकेको पनि हुन सक्छ । तर, उहाँले फोहर फाल्ने अथवा थुपार्ने स्थान (ल्यान्डफिल साइट) को व्यवस्थापन गर्ने काम हाम्रो हैन भन्ने कुरा चैं स्पष्टनै पार्नु भएको छ । ल्यान्डफिल साइटको व्यवस्थापन होस वा शहरवाट फोहर उठाउने, कुरा एउटै हो । मतदाताहरुको चाहना त शहरमा जताततै फोहरको डँगुर नथुप्रियोस, शहर स्वच्छ हराभरा होस भन्ने नै हो । अब फोहर व्यवस्थापन गर्ने जिम्मानै महानगरको हैन भने पछि त खेलै खत्तम भो नि ।
हुन त उहां अमेरिका लगायत विभिन्न मुलुकका शहरहरु घुमी आएका व्यक्ति, उहांलाई जति मतदाताहरुलाई के थाहा होलान् फोहर व्यवस्थापन कसरी गर्नु पर्छ भनेर । सायद, उहांले भ्रमण गरेका शहरहरुमा पनि फोहर व्यवस्थापन गर्ने जिम्मा महानगरको नभई अरु कसैको जिम्मामा भएकोले त्यहि पो सिको गरेको हो कि ? स्थानिय तहमा जनप्रतिनिधि आउला अनि दशौं बिसौं वर्ष देखि जनप्रतिनिधिको अभावमा अस्तव्यस्त भई-रहेका काठमाण्डौं शहरको समग्र विकास होला भन्ने सपना बोकी निर्वाचनमा मत हालेका मतदाताहरु त उल्लु पो सावित हुन पुगेछ । बिचरा मतदाताहरुलाई यति पनि थाहा भएन कि काठमाण्डौंको फोहर व्यवस्थापन गर्ने जिम्मा महानगरको जिम्मा नै हैन भनेर ।
फोहर व्यवस्थापन गर्ने कामनै महानगरको नभएपछि अब अरु के कुराको आशा गर्ने महानगरवाट ? सडकको खाल्डाखुल्डीको कुरा उठाउं भने सडक विभागमा जाउ भन्लान, बिजुलीको खम्बा, अव्यवस्थित तार आदिको कुरा गरौं भन्दा बिजुली अड्डा, केबल लाइन, टेलिफोन कार्यालयमा सम्पर्क गर्न जाउ भन्ने होलान । शुद्ध पिउने पानीको व्यवस्थापन हुनु प¥यो भन्यो भने मेलम्ची आयोजनालाई भन्न जाउ भन्ने होलान । धुलो धुवांको कुरामा वातावरण विभागतिर जाउ भन्ला, ढल निकासको वारे भन्नु परेमा सम्वन्धित कार्यालय जानु भन्ला, ट्राफिक जामको कुरा त निकाल्नै भएन, सिधै ट्राफिक कार्यालय जाउ भनि हाल्लान । भनेसि नगरवासीले महानगरवाट कुन क्षेत्रको विकासको लागि अपेक्षा राख्ने त अब ?
यो पनि हैन, त्यो पनि हैन भने काठमाण्डौंको महानगरको काम चाहिं के त ? खाली नाना थरिका कर मात्र असुल गर्दै बस्ने कि ? यसरी, मतदाताहरुले अपेक्षा गरेका कुनै पनि काम महानगरले सम्बोधन गर्न सक्तैन भने महानगर हुनु नहुनुमा के फरक भयो र ? वर्षौ वर्ष विना जनप्रतिनिधिको महानगर पनि चलेकै थियो । सामान्य रुपमा विकास निर्माणका कार्यहरु पनि भएकै थिए । यदि नगरवासीले भोगिरहेका अनेकन समस्याहरु जिंउ का तिंउनै रहने भए स्थानिय तह निर्वाचनकै लागि भनि खर्चिएका अरबौं अरब धनराशी वालुवामा पानी हाले सरह भएन र ?
माथि शिर्षकमै भनेझैं साच्चै फोहर व्यवस्थापन गर्ने जिम्मा महानगरको हैन भने यो नगरबासीको लागि ठुलो दुर्भाग्य हो । संसारभरी जताततै महानगरको नगरवासी प्रतिको जिम्मा अतिनै गहन तथा संवेदनशिल छ । नगरवासीको आधारभूत आवश्यकता महानगरले सम्वोधन गर्नै पर्छ । यो कुरा काठमाण्डौंको मेयरले पनि बुझेकै कुरा हो । तर बुझेर पनि बुझ पचाई जिम्मेवारीवाट पन्छिन मेयर जस्तो पदलाई भने कदापि सुहाउदैन ।